Iindaba - iTekhnoloji | Uluhlu lwe-crux yokulahleka kwebhokisi kunye namanyathelo okuphucula
Ukuphulukana kwamashishini eekhathoni yinto ephambili echaphazela iindleko. Ukuba ilahleko ilawulwa, inokunyusa ukusebenza kweshishini kwinqanaba elikhulu kwaye iphucule ukhuphiswano lweemveliso. Makhe sihlalutye ilahleko ezahlukeneyo kumzi-mveliso weebhokisi.
Ukubeka ngokulula, ilahleko iyonke yefektri yebhokisi yimalini yegalelo lephepha eliluhlaza ukhupha isixa seemveliso ezigqityiweyo ezibekiweyo. Umzekelo: ukufakwa kwephepha eluhlaza okwenziwe ngenyanga kufuneka kuvelise i-1 yezigidi zeemitha zesikwere, kwaye umthamo ogqityiweyo wokugcina imveliso yi-900,000 yeemitha zesikwere, emva koko ilahleko iyonke yomzi-mveliso kwinyanga yangoku = (100-90) = 100,000 yemitha, kunye ilahleko iyonke yi-10/100 × 100% -10%. Ilahleko iyonke inokuba kuphela linani eliqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kwelahleko kwinkqubo nganye kuya kucaca ngakumbi, kwaye kuya kuba lula ngakumbi kuthi ukufumana iindlela kunye neempumelelo zokunciphisa ilahleko.
1. Ikhadibhodi yokulahleka kwekhoritha
● Inkunkuma yeemveliso ezineziphene
Iimveliso ezinesiphene zibhekisa kwiimveliso ezingafanelekanga emva kokusikwa ngumatshini wokusika.
Inkcazo yefomula: Indawo yelahleko = (ukunciphisa ububanzi ububanzi x ukusika inani) × ukusika ubude x inani leemela zokusika iimveliso ezingalunganga.
Oonobangela: ukusebenza ngokungafanelekanga ngabasebenzi, iingxaki zomgangatho wephepha elisisiseko, ukungalunganga kakuhle, njl.
● Inkcazo yefomula
Indawo yelahleko = (ukunciphisa ububanzi × inani lokusika) × ubude bokunqunyulwa × inani leemela zokusika iimveliso ezingalunganga.
Amanyathelo okuphucula: ukomeleza ulawulo lwabasebenzi kunye nokulawulwa komgangatho wephepha eliluhlaza.
● Ukuphulukana nemveliso enkulu
Iimveliso ezinkulu zibhekisa kwiimveliso ezifanelekileyo ezigqitha isixa sephepha esimiselweyo. Umzekelo, ukuba amaphepha ali-100 acwangciselwe ukondliwa, kunye neemakhishithi ezili-105 zeemveliso ezifanelekileyo zondliwa, ke ezintlanu zazo ziimveliso eziphambili.
Inkcazo yefomula: Indawo yokulahleka kwemveliso ephezulu = (ukunciphisa ububanzi × inani lokusika) × ubude bokunqunyulwa × (inani labasiki abangalunganga-inani labasiki abacwangcisiweyo).
Oonobangela: iphepha elininzi kwi-corrugator, iphepha elingachanekanga elifumana i-corrugator, njl.
Amanyathelo okuphucula: ukusetyenziswa kwenkqubo yolawulo lweemveliso zecorrugator kungasombulula iingxaki zokulayisha okungachanekanga kwephepha kunye nephepha elingalunganga lokufumana kumatshini omnye wethayile.
● Ukucheba ilahleko
Ukucheba kubhekisa kwinxalenye esikiweyo xa usika imiphetho ngomatshini wokucheba kunye nowokucheka umatshini wethayile.
Inkcazo yefomula: Ukunciphisa indawo yelahleko = (iphepha lokusika ububanzi bewebhu × inani lokusika) × ubude bokunqunyulwa × (inani leemveliso ezilungileyo + inani leemveliso ezimbi).
Isizathu: ilahleko eqhelekileyo, kodwa ukuba inkulu kakhulu, unobangela kufuneka uhlalutyiwe. Umzekelo, ukuba ububanzi bokucheba bomyalelo bungu-981 mm, kwaye ubuncinci bokucheba ububanzi obufunwa yirrrator yi-20mm, emva koko i-981mm + 20mm = 1001mm, leyo inkulu ngokuchanekileyo kune-1000mm, sebenzisa kuphela iphepha le-1050mm ukuya. Ububanzi bomda yi-1050mm-981mm = 69mm, enkulu kakhulu kunokusika okuqhelekileyo, ibangela ukuba indawo yokulahleka kokunciphisa inyuke.
Amanyathelo okuphucula: Ukuba zezi zizathu zingasentla, jonga ukuba i-odolo ayicuthwanga, kwaye iphepha londliwa ngephepha le-1000mm. Xa eyokugqibela iprintiwe kwaye ibhokisi isongwa, iphepha elingu-50mm ububanzi lingagcinwa, kodwa oku kuya kuba kwinqanaba elithile Ukunciphisa ukusebenza ngokushicilela. Elinye inyathelo lokuthintela into kukuba isebe lezentengiso linokuyithathela ingqalelo le nto xa lisamkela iiodolo, liphucule ulwakhiwo lweodolo, kunye nokwenza ngcono iodolo.
● Ukulahleka kwetab
Ukubeka itheyibhile kubhekisa kwinxalenye eveliswayo xa kufuneka iphepha elibanzi lephepha ukondla iphepha ngenxa yokunqongophala kwephepha elisisiseko kwiphepha lewebhu. Umzekelo, iodolo kufuneka yenziwe ngephepha elinobubanzi bephepha le-1000mm, kodwa ngenxa yokunqongophala kwephepha le-1000mm okanye ezinye izizathu, iphepha kufuneka londliwe nge-1050mm. I-50mm eyongezelelweyo yitheyibhile.
Inkcazo yefomula: Indawo yokulahleka kwetheyibhile = (iphepha lewebhu emva kwephepha elicwangcisiweyo lewebhu) × ubude bokusika × (inani leemela zokusika zeemveliso ezilungileyo + inani leemela zokusika iimveliso ezimbi)
Izizathu: ukugcinwa kwephepha ekrwada ngokungekho ngqiqweni okanye ukuthengwa okungalindelekanga kwiphepha elingavunyelwanga lisebe lezentengiso.
Amanyathelo okuphucula: Ukuthengwa kwenkampani kufuneka kuphonononge ukuba ukuthengwa kwephepha eluhlaza kunye nokugcinwa kwezinto kuyahlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye bazame ukusebenzisana nabathengi kulungiselelo lwephepha ukuqonda umbono we-t-mode. Kwelinye icala, isebe lentengiso kufuneka libeke uluhlu lweemfuno ezibonakalayo kwangaphambili ukunika isebe elithengayo umjikelo wokuthengwa kwempahla ukuqinisekisa ukuba iphepha lasekuqaleni likho. Phakathi kwazo, ukulahleka kweemveliso ezineziphene kunye nelahleko yeemveliso ezibalaseleyo kufanele ukuba ibe yeyelahleko yokusebenza kwesebe lemveliso yekhadibhodi enezinto, enokuthi isetyenziswe njengesalathiso sesebe ukukhuthaza ukuphucula.
2. Ukulahleka kwebhokisi yokuprinta
● Ilahleko eyongezelelweyo
Inani elithile lemveliso eyongezelelweyo liya kongezwa xa ibhokisi iveliswa ngenxa yokuvavanywa komatshini wokushicilela kunye neengozi ngexesha lokuveliswa kwebhokisi.
Inkcazo yefomula: Indawo yelahleko yokongezwa = ukongezwa okucwangcisiweyo ubungakanani × indawo yeyunithi yebhokisi.
Oonobangela: ilahleko enkulu kumatshini wokushicilela, inqanaba lokusebenza eliphantsi lomqhubi woshicilelo, kunye nelahleko enkulu yokupakisha kwinqanaba elizayo. Ukongeza, isebe lokuthengisa alinalawulo kwimali yee-odolo ezongezelelweyo ezibekiweyo. Ngapha koko, akukho sidingo sokongeza ubuninzi obungaphezulu. Ubuninzi obuninzi obuninzi buya kukhokelela ekuveliseni okungadingekile. Ukuba imveliso egqithisileyo ayinakwetyiswa, iya kuba "luhlu olufileyo", Oko kukuthi, uluhlu lwempahla olugqithile ngexesha, eyilahleko engeyomfuneko. .
Amanyathelo okuphucula: Le nto kufuneka ibe yeyelahleko yokusebenza yesebe lokushicilela, elinokuthi lisetyenziswe njengesalathiso sesebe ukukhuthaza ukuphuculwa komgangatho wabasebenzi kunye nenqanaba lokusebenza. Isebe lezentengiso liza komeleza isango levolumu yoku-odola, kunye nemveliso yevolumu yokuvelisa kunye nentsingiselo elula Ukwenza umahluko, kuyacetyiswa ukuba kubandakanywe ukwanda kwinqaku lokuqala ukulawula ukusuka kumthombo ukunqanda okungafunekiyo ngaphezulu- okanye ngaphantsi- imveliso.
● Ukusika ilahleko
Xa ibhokisi iveliswa, indawo ejikeleze ikhadibhodi eqengqwe ngumatshini wokusika kukulahleka komphetho.
Inkcazo yefomula: Indawo yelahleko yokuqengqeleka komda = (iphepha elilungisiweyo lendawo-emva kokuqengqeleka) × ubungakanani bendawo yokugcina impahla.
Isizathu: ilahleko yesiqhelo, kodwa isizathu kufuneka sihlalutyiwe xa ubuninzi bukhulu kakhulu. Kukwakhona oomatshini bokuzisika abasisigxina abazenzekelayo, kunye nabe-semi-othomathikhi, kunye neemfuno zokuqengqeleka ezifunekayo nazo zahlukile.
Amanyathelo okuphucula: oomatshini abahlukeneyo bokufa kufuneka bongezwe kwangaphambili ngokuqengqeleka komda wokunciphisa ilahleko yomda kangangoko kunokwenzeka.
● Ukuphulukana nelahleko epheleleyo
Abanye abasebenzisi beekhathoni bafuna ukuvuza okungapheliyo. Ukuqinisekisa umgangatho, kunyanzelekile ukuba kwandiswe indawo ethile ejikeleze ibhokisi yokuqala (njengokunyuka nge-20mm) ukuqinisekisa ukuba ibhokisi eqengqelweyo ayizukuvuza. Inxalenye eyonyukileyo ye-20mm kukulahleka kwephepha elipheleleyo.
Inkcazo yefomula: iphepha elipheleleyo lokucheba indawo yelahleko = (iphepha elilungisiweyo lendawo-eyona ndawo yebhokisi) × ubungakanani bendawo yokugcina impahla.
Isizathu: ilahleko yesiqhelo, kodwa xa ubungakanani bukhulu kakhulu, isizathu kufuneka sihlalutyiwe siphuculwe.
Ilahleko ayinakupheliswa. Into esinokuyenza ukunciphisa ilahleko ukuya kwelona nqanaba lisezantsi nelona lifanelekileyo ngeendlela ngeendlela kunye nobuchule kangangoko kunokwenzeka. Ke ngoko, ukubaluleka kokwahlulahlula ilahleko kwicandelo elidlulileyo kukuvumela iinkqubo ezifanelekileyo ziqonde ukuba ingaba iilahleko ezahlukeneyo ziyafaneleka, ingaba ikhona indawo yokuphucula kwaye yintoni ekufuneka iphuculwe (umzekelo, ukuba ilahleko yeemveliso eziphezulu kakhulu nayo enkulu, kunokuba yimfuneko ukuphonononga ukuba i-corrugator iyalilanda iphepha. Ukuchaneka, ukulahleka kwelahleko kukhulu kakhulu, kunokuba yimfuneko ukuphonononga ukuba ulungiso lwephepha loqobo lwalunengqiqo, njl. njl.) ukufezekisa injongo yokulawula kunye ukunciphisa ilahleko, ukunciphisa iindleko, kunye nokuphucula ukhuphiswano lweemveliso, kwaye kunokwenza izalathi zovavanyo kumasebe ohlukeneyo ngokweelahleko ezahlukeneyo. Umvuzo ngokulungileyo kwaye wohlwaye okubi, kwaye wandise ihlombe labasebenzisi ukunciphisa ilahleko.